Brexit: The Uncivil War 2019 On Myanmar Tube - Myanmar Subtitle Movies - ျမန္မာစာတန္းထုိး - Myanmar Tube
Brexit: The Uncivil War 2019 On Myanmar Tube – Myanmar Subtitle Movies – ျမန္မာစာတန္းထုိး
Target voters. Divide nation. Disrupt system. Meet the man who altered the history of BritainJan. 19, 2019UK93 Min.TV-14
ဒီဇာတ်ကားကတော့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားကြီး Benedict Cumberbatch ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်လှတဲ့အနုပညာနဲ့
နိုင်ငံရေးနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အလွန်အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာပါတော့တယ်။ IMDb အနေနဲ့ကလဲ 7.0 ရရှိထားပါတယ်။
ဘရက်စစ်ဆိုတာ Britain Exit လို့ခေါ်တဲ့ ဘရစ်တိန်က အီးယူ(European Union)ကထွက်ခွာမှုပါ။ ဘရစ်တိန်က အီးယူထဲကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ အီးယူထဲမှာ ပါဝင်တာက ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာတွေလဲရှိပါတယ်။ ဘရစ်တိန်နိုင်ငံသားတစ်ချို့က အီးယူထဲမှာ ဆက်နေချင်တယ် တစ်ချို့ကထွက်ချင်တယ်။ အဲ့တော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကမ်မရွန်းကပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်လုံးရလဒ်ကတော့လူထုမဲက အီးယူကထွက်ခွာမယ့်ဘက်က ‌အောင်နိုင်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အီးယူကနေတော့ ဝုန်းဒိုင်းထွက်လို့မရသေးပါဘူး။ အခုလောလောဆယ်မှာ အီးယူကထွက်ခွာဖို့ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးနေဆဲပါ။ လျော်ကြေးပေးရမလား နယ်စပ်ကိစ္စတွေကိုရောဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲ တခြားကိစ္စတေ‌ွကိုလည်းဆက်ဆွေးနွေးနေဆဲပါ။ လာမယ့် အောက်တိုဘာ31မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ပြည့်သူ့ဆန္ဒရွေးကောက်ပွဲမှာ အီးယူကထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်း ဘယ်လိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီကမ်ပိန်းရဲ့ နည်းဗျူဟာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒွမ်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒွမ်က ဖန်တရာတေနေတ‌ဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းဟောင်းတွေကို မုန်းတီးသူပါ။ သူကသမားရိုးကျလမ်းစဉ်မလိုက်ဘူး။ အဲ့တော့ လူတွေသူ့ကို‌ခေါ်ကြတာတော့ လူ့ဂွစာပေါ့ အရူးပေါ့။ တခြားပါတီတွေက ကြော်ငြာတွေ ပိုစတာတွေသုံးပြီး မဲဆွယ်တဲ့အချိန်မှာ ဒွမ်ကတော့ ခေတ်မှီတဲ့အင်တာနက် ဖေ့ဘွခ်နဲ့ တွစ်တာတွေကိုအဓိကသုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တော့ ဒီဘရက်စစ်တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်လာအောင် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်ခဲ့တဲ့ ဒွမ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးခဲ့တယ် လူတွေရဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမဲဆွယ်ပြီး သူတို့ကမ်ပိန်းရဲ့အောင်နိုင်မှုကို ဘယ်လိုယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ရှုစားလိုက်ပါဦး။။
IMDb Rating 7.0 9,140 votes